Izindaba - Sethula isizukulwane esisha se-Intra-Oral Sensors
Kwethulwa isizukulwane esisha se-Intra-Oral Sensors
Ngabe izinzwa zomlomo zangaphakathi ziyafana kuwo wonke umtholampilo?
Kuze kube manje, besicabanga ukuthi inzwa yomlomo yangaphakathi iyithuluzi lamazinyo eliyisisekelo kakhulu elisivumela ukuthi sibheke izilonda zeziguli eduze.
Kodwa-ke, njengoba inani nokuncintisana kodokotela bamazinyo kuqhubeka nokukhula, ngokungazelelwe sicabange "ukubuyela kuzisekelo".
“Kumele sibuyele emuva ekubalulekeni kwezinto eziyisisekelo. Izinzwa zomlomo zangaphakathi zincane futhi ziyisisekelo kepha zibalulekile ekuxilongweni. Kufanele sinake kakhulu izinga lezinto eziyisisekelo ukuze sisinde kulo mncintiswano. ”
Ingabe weneliseke ngempela ngenzwa yakho?
Yini inkinga enkulu ngokusebenzisa inzwa yangaphakathi?
Iziguli eziningi zizizwa zingakhululekile lapho inzwa eqinile futhi eqinile icasula izinsini nomlomo wazo. Ezimweni ezimbi kakhulu, ezinye iziguli zigcina zibambe umlomo.
Lo magazini sekuyisikhathi eside uyingxenye "yemvelo" yomtholampilo wamazinyo, kepha sidinga ukuthuthuka kulokho "okungokwemvelo".
Izici eziphawulekayo zinikeza i-Best Comfort.
Isimo esijwayelekile se-arch yethu asikwelekwele, kepha siyindilinga. Endaweni ye-incisor, ukuthambekela kwamazinyo kungahluka kumuntu nomuntu, futhi isithombe esisibonayo siyisicaba ngenkathi i-arch yomuntu inezinhlangothi ezintathu.
Kungakho ukuthola isithombe somlomo esicacile sangaphakathi ngenzwa eqinile futhi eyisicaba kungaba nzima.
Impendulo siyithole kokuhlangenwe nakho.
Endleleni eya ebuntofontofo besiguli, ukuqamba okusha okugxile kwinduduzo sekuqalile. Futhi ekugcineni sathola ukuthi zonke izinto ezintsha zivela kokuhlangenwe nakho. Enqubweni yethu yokusiza ukunethezeka kweziguli, sifunde ukuthi ulwazi lusiza emisha.
Ngokwenza ukuthi ithambe, sizoletha lokhu kusetshenziswa kwakho ukuze uthole induduzo enhle.
Manje, iGeneration of Soft Sensors isiqalile. Ushintsho oluningiliziwe luzokulethela izinzuzo eziningi.
Hlisa ukukhathazeka kwakho futhi umane ugxile ekusebenzeni kwakho!
Ufuna ukukhululeka emaphutheni?
Wena nabasebenzi bakho nizochitha isikhathi esibalulekile nesiguli sakho lapho kwenzeka la maphutha, futhi kudale ukuphazamiseka kokuxilongwa.
Ukubeka okulungiselelwe kungukhiye obaluleke kakhulu ekutholeni isithombe
I-EzSensor Soft yakhelwe ukhothamo.
Inzwa ejwayelekile eqinile kunzima ukuyibeka maqondana nezindawo ezingaphambi komhlaba nezomhlathi, kanti nge-EzSensor Soft, ungabeka kalula umklamo wayo oyindilinga futhi
Okwenziwe nge-Silicone ukulingana ngokwanele ngesikhathi sokusetshenziswa.
Njengoba ibambelela entanjeni eyindilinga yesiguli kancane, umumo ogobile we-ergonomically uvimbela inzwa ukuthi ishelele emlonyeni. Lokhu akusizi nje kuphela iziguli ukuthi zizwe ubuhlungu obuncane.
Imiphetho ethambile yembula indawo efihliwe
Unqenqema oluthambile lwe-EzSensor Soft vumela abasebenzi bakho babeke inzwa kalula kunakuqala futhi ukuqondaniswa nomthombo we-X-ray kungalungiswa kahle ngokufanele.
Lokhu kunciphisa ukugqagqana phakathi kwezinyo ngalinye, futhi ngenxa yalokho, ungabheka indawo efihliwe esithombeni.
I-EzSensor Soft ikuvumela wena nethimba lakho ukuthi nenze ukuxilongwa okuqondile.
Ukuthinta okuthambile kuqinisekisa ukunethezeka kokugcina kwesiguli
Ukuzizwa ufudumele nge-silicone ye-Biocompatible
Inzwa yakhelwe ngengaphandle elithambile ne-Uni-body enentambo.
Idizayini egxile esigulini se-EzSensor Soft ilungele ngisho nemengamo emincane.
Ergonomically oyindilinga futhi usike onqenqemeni
Wonke uDokotela uneziguli ezizwelayo. Thanda…
I-mandibular torus (pl. Mandibular tori) ukukhula kwamathambo ku-mandible eduze kwendawo eseduze nolimi. I-mandibular tori ivame ukubakhona eduze kwama-premolars nangaphezulu kwendawo yokunamathiselwa kwemisipha ye-mylohyoid ku-mandible.
Ikakhulu, ezinye iziguli zingadlula ebuhlungwini obunzima nokuqunjelwa ngenxa ye-tori yazo ecasukile.
Odokotela kufanele banake kakhulu lapho bebeka. I-EzSensor Soft ingaba inketho engcono kakhulu kulezi zinhlobo zeziguli ngenxa yokuthamba kwayo.
Ngaphezu kwalokho, inkomba yethu yesigaxa se-'EsSoft 'yenzelwe ukukhulisa ukunethezeka kwesiguli kanye nokubeka inzwa.
Uzipho oluthambile lukuvumela ukuthi ulungise kahle ukungezwani nendawo eqinile yokuluma nengalo kuqinisekisa ukuma ngokunemba ngokugcina i-engeli yayo yangempela (90 ') emandleni okugaya.
Izwa ikhwalithi yesithombe ehlukile
Ukuklwebheka kwe-emulsion kanye nokulibaziseka kokuskena kwepuleti kunomthelela omkhulu ekunciphisweni kokuqina kwe-pixel kanye nekhono lokuthola i-occlusal caries.
Ikhwalithi yesithombe ephakeme ye-EzSensor Soft iqinisekisiwe nge-high-definition kanye nesisombululo semibono se-33.7lp / mm esihambisana nosayizi we-pixel we-14.8μm. Ngomsindo nokucindezelwa kwe-artifact, i-EzSensor Soft inikeza izithombe ezicace bha nezingaguquguquki kakhulu.
Usayizi wePixel 30 μm (Phezulu) 60 μm (Phansi) 23 μm (Phezulu) 30 μm (Phansi) 14.8 μm
Ukuqina Kwesigaba Esiphezulu - I-Drop Resistant
I-EzSensor Soft iyinzwa ehlala isikhathi eside kunazo zonke etholakalayo. Imvamisa, lapho inzwa yehliswa ngephutha noma inyathelwa, iwela emonakalweni.
Ingaphandle le-EzSensoft elithambile elifana nenjoloba lingasiza ekuvimbeleni lokho! Ingamelana nomthelela wangaphandle njengokuphonsa futhi ngaleyo ndlela inciphise ubungozi bokulimala.
Ungagcina i-EzSensor Soft yakho ihlanzekile ngangokunokwenzeka kalula.
Ukuqina Kwe-Class Ephezulu - Ukuluma Ukuluma
Isithombe esingenhla isivivinyo sokuluma esithathwe esigabeni sokukhiqizwa komkhiqizo. Kulesi sivivinyo, sisebenzise amandla ka-50N izikhathi eziyikhulu kunzwa kuzinkomba zombili eziphezulu nezingezansi. Lokhu kuhlolwa kungukukhiqiza kabusha kokuhlola kokunyakaza kwamazinyo.
Njengomphumela wokuhlola, kwasungulwa ukuthi i-EzSensor Soft ayonakalanga, yize amandla ka-50 N (cishe u-5 kgf), omkhulu kunamandla okugaya,
Ukuqina Kwesigaba Esiphezulu - Ukugoba Ikhebula
Njengoba ikhebula lenzwa livame ukuphazamisa ukuthatha isithombe sangaphakathi somlomo se-molar, kunabasebenzisi abaningi abasebenzisa ikhebula endaweni ethile. Ukuxazulula le nkinga, senze isivivinyo sokugoba ikhebula njengokugoba phezulu, phansi, ngakwesobunxele, kwesokudla esigabeni sokuthuthuka. Ikakhulu, ukukhululeka kobunzima benzwa (ukuxhumana phakathi kwekhebula nemodyuli yenzwa) kuklanyelwe ukuqina ngokwanele.
Izinga eliphakeme kakhulu le-Ingress, Solids, Liquids Protection
Ukuvikelwa kwe-Ingress Idijithi yokuqala: Ukuvikelwa kwama-Solids Idijithi Yesibili: Ukuvikelwa Kwamanzi
I-EzSensor Soft ilinganise i-IP68, ehlukanisa inzwa ukuthi ibe nokuvikelwa okuphelele ekuthintaneni nothuli nezikhathi ezinde zokucwiliswa ngaphansi kwengcindezi. Ngaleli zinga lokuvikelwa, inzwa ingamanziswa yenzalo yokuvala inzalo kusuka kuma-microorganisms anjengeStreptococcus Mutans neMycobacterium Tuberculosis.
Ukubeka okulungiselelwe kukunikeza Ukusebenza Isikhathi
Inqubo Umahluko Wesikhathi: Intraoral Sensor VS. Ifilimu ne-IPS
Ngokuvamile, kuthatha imizuzu engu-16 (amasekhondi angama-960) ukubuka eyodwa
isithombe sefilimu. Okwe-IPS, umkhawulo ongu-167 sec. ziyadingeka ukuphatha nokuskena (ukucubungula isithwebuli) ngaphambi kokubukwa kokugcina
yesithombe se-radiographic. Kodwa-ke, inzwa yomlomo ye-Intra idinga kuphela izinyathelo ezintathu - ukusetha, ukubeka, nokuvezwa - ukuqapha isithombe futhi lezi zinyathelo ezi-3 zithatha cishe imizuzwana engama-20 isiyonke. Odokotela bangonga isikhathi esithe xaxa nge-EzSensor Soft, ngoba inikeza indawo elula esebenza kalula.
Ngubani ongafuni umtholampilo ohlanzekile, wanamuhla futhi uvulekile?
Abasebenzisi bamafilimu badinga ukuba nendawo ebonakalayo yokugcina amafilimu negumbi elimnyama lokucubungula ngamakhemikhali izithombe ze-X-ray. Kodwa-ke, esimweni sezinzwa zangaphakathi, odokotela badinga kuphela isikhala esincane se-PC nokuqapha ukubuka izithombe.
Abahlengikazi bangaguqula igumbi elimnyama futhi bagcine igumbi lokugcina libe ngelesiguli
igumbi lokulinda noma indawo yokwamukela izivakashi.